काठमाडौं ।डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि आगामी अर्थमन्त्रीका लागि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र तिब्र छलफल भइरहेको छ ।अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल र परामर्श भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका बामदेव गौतम आफू अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा लागेका छन् । उनले आफूलाई कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री चाहिने अडान राखेका छन् । तर गौतमको सम्भावना भने कम रहेको बताइन्छ ।त्यस्तै, अर्कातर्फ अर्थमन्त्रीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिरहेको छ । पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालय राम्रोसँग हाँक्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफू निकट राख्न चाहेकाले पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने यकिन भएको छैन ।त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्री निकट छन् । अरु कसैमाथि पनि सहमति जुट्न नसके पौडेललाई ल्याउने योजनामा प्रधानमन्त्री भएको बताइन्छ । हुन न पौडेलले यसअघि आफू पार्टीकै काम गर्ने मन्त्री नबन्ने भन्ने इच्छा जाहेर गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ । तर ओलीले विश्वास पात्रका रुपमा दबाब दिए पौडेल अर्थमन्त्री बन्न सक्छन् । उनी पार्टीका महासचिव हुन् । उनले पार्टीको विवाद मिलाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले सबैले उनलाई उपयूक्त पात्रका रुपमा हेरेका छन् । पौडेलको पक्षमा प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि खुलेर विरोध गर्न सक्ने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीको चाहना र अर्काे पक्षको समेतले विरोध गर्न नसक्ने अवस्था भएका कारण पौडेल नै अर्थमन्त्रीका रुपमा शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा देखिन्छन् ।उता सरकारका प्रवक्ता भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने पार्टीभित्र कुरा भइरहेको छ । तर उपयुक्त भने पोडेल नै भएको स्रोतको बुझाई छ । यसअघि नै गौतमको नियुक्ति बदर र मन्त्री नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ । अदालतले गौतमलाई सफाइ दिए पनि उनी अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको छ ।डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनेका छन् । अर्को कुनै विश्वास पात्रलाई राज्यमन्त्री दिएर अर्थ मन्त्रालय चलाउने आँकलन पनि गरिएका छन् । त्यसकारण अर्थ मन्त्रालय हाँक्न डा.खतिवडा र पौडेलको तालमेल मिलाउन खोजिएको छ । तर अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन ।
७ आश्विन २०७७, बुधबार १६:५७
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि आगामी अर्थमन्त्रीका लागि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र तिब्र छलफल भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल र परामर्श भइरहेको छ । राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका बामदेव गौतम आफू अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा लागेका छन् । उनले आफूलाई कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री चाहिने अडान राखेका छन् । तर गौतमको सम्भावना भने कम रहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, अर्कातर्फ अर्थमन्त्रीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सुरेन्द्र पाण्डेलाई अघि सारिरहेको छ । पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुन् । उनले अर्थ मन्त्रालय राम्रोसँग हाँक्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालय आफू निकट राख्न चाहेकाले पाण्डेलाई अर्थ मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने यकिन भएको छैन ।
त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्री निकट छन् । अरु कसैमाथि पनि सहमति जुट्न नसके पौडेललाई ल्याउने योजनामा प्रधानमन्त्री भएको बताइन्छ । हुन न पौडेलले यसअघि आफू पार्टीकै काम गर्ने मन्त्री नबन्ने भन्ने इच्छा जाहेर गरेको पनि स्रोतको भनाइ छ । तर ओलीले विश्वास पात्रका रुपमा दबाब दिए पौडेल अर्थमन्त्री बन्न सक्छन् । उनी पार्टीका महासचिव हुन् । उनले पार्टीको विवाद मिलाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएकाले सबैले उनलाई उपयूक्त पात्रका रुपमा हेरेका छन् । पौडेलको पक्षमा प्रचण्ड नेपाल समूहले पनि खुलेर विरोध गर्न सक्ने स्थिति छैन । प्रधानमन्त्रीको चाहना र अर्काे पक्षको समेतले विरोध गर्न नसक्ने अवस्था भएका कारण पौडेल नै अर्थमन्त्रीका रुपमा शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा देखिन्छन् ।
उता सरकारका प्रवक्ता भएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि अर्थमन्त्री बन्न सक्ने पार्टीभित्र कुरा भइरहेको छ । तर उपयुक्त भने पोडेल नै भएको स्रोतको बुझाई छ । यसअघि नै गौतमको नियुक्ति बदर र मन्त्री नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ । अदालतले गौतमलाई सफाइ दिए पनि उनी अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना भने निकै कम रहेको छ ।
डा. खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनेका छन् । अर्को कुनै विश्वास पात्रलाई राज्यमन्त्री दिएर अर्थ मन्त्रालय चलाउने आँकलन पनि गरिएका छन् । त्यसकारण अर्थ मन्त्रालय हाँक्न डा.खतिवडा र पौडेलको तालमेल मिलाउन खोजिएको छ । तर अहिलेसम्म यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन ।
Prevकाठमाडौं उपत्यकामा आज ६३७ जना संक्रमित थपिए
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको सांसदको दाबीNext
विष्णु पौडेलको पोल्टामा अर्थमन्त्री ? प्रधानमन्त्रीले च्याप्दा सम्भावना बलियो